DEG-DEG: Chelsea Oo Dalabkii Ugu Qaalisanaa Ka Gudbisay Xiddiggii Talyaaniga Ee Wacdaraha Ka Dhigay Euro 2020 - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaDEG-DEG: Chelsea Oo Dalabkii Ugu Qaalisanaa Ka Gudbisay Xiddiggii Talyaaniga Ee Wacdaraha Ka Dhigay Euro 2020
DEG-DEG: Chelsea Oo Dalabkii Ugu Qaalisanaa Ka Gudbisay Xiddiggii Talyaaniga Ee Wacdaraha Ka Dhigay Euro 2020
July 14, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa gudbisay dalabkeedii ugu qaalisanaa abid ee ay ciyaartoy ku iibsato, kaas oo ay ku doonayso xiddig ka tirsanaa xulka qaranka Talyaaniga oo wacdaro ka dhigay tartankii qaramada Yurub ee Euro 2020.
Chelsea ayaa si xooggan ugu jirta suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaagan, waxaanay ka doonaysaa inay kasoo qaadato xiddigo ka caawiya inay difaacato tartanka Champions League ee ay xilli ciyaareedkii hore ku guuleysatay iyo in ay horyaalka Premier League dib u hanato.
Tababare Thomas Tuchel oo Champions League ugu qaaday Chelsea muddo shan bilood oo uu tababare u ahaa, waxa uu hadda isku diyaarinayaa bilowga xilli ciyaareedka cusub, isagoo u wada dagaallami doona saddexda koob ee Ingiriiska ee Premier League, FA Cup iyo Carabao Cup, iyo saddexda kale ee Champions League, European Super Cup iyo Fifa Club World Cup, taas oo ka dhigan inay haystaan fursad ay ugu guuleysan karaan lix koob oo saddex maxalli yihiin.
Mulkiilaha Chelsea ee Roman Abramovich ayaa bishii May u ballan-qaaday Tuchel inuu siin doono lacagta uu u baahan yahay inuu kusoo adeegto suuqa xagaagan, waxaanay hore diiraddoodu u saarnayd Erling Haaland oo 150 milyan oo Gini ay la dul-taagan yihiin, hase yeeshee waxa kale oo hadda la shaaciyey in Blues ay gudbisay dalabkeedii ugu qaalisanaa ee rasmi ah oo ay gaadhsiisay kooxda Talyaaniga ee Juventus.
Chelsea ayaa Juventus ka doonaysa xiddiga Talyaaniga ah ee Federico Chiesa oo wacdaro ka dhigay tartankii qaramada Yurub.
Warka ayaa sheegay in Chelsea ay u bandhigtay Juventus €100 milyan oo Euro, taas oo haddii ay ku guuleysato ka dhigaysa Chiesa saxeexii ugu qaalisanaa ee Chelsea iyadoo uu hore rikoodhka u haystay goolhaha reer Spain ee Kepa Arrizabalaga oo 72 milyan oo Gini ku taagnaa iyo Kai Havertz oo 71 milyan oo Gini ay kusoo iibsadeen xagaagii, ahna ciyaartoyga labaad ee ugu qaalisan ee ay Chelsea iibsato abid.
Si kastaba, Juventus ayaa laga sugayaa inay jawaab ka bixiso dalabka Chelsea ee Federico Chiesa oo horena ay u doonaysay Bayern Munich, waxayna warbaahinta Talyaanigu sheegayaan in waqtigan aanay Old Lady diyaar u ahayn inay iibiso xiddigeedan.